Madaxweynaha Brazil oo shaaciyey inuu haleelay safmarka Covid-19
65-sano jirkan ayaa kamid ah hogaamiyeyaasha si ku cel-celis ah u dafiray halista musiibadan iyo kala fogaanshiyaha.
BRASILIA, Brazil – Madaxweynaha Brazil, Jair Bolsonaro, ayaa ku dhawaaqay in laga helay safmarka Coronavirus, sidda ay ku warantay The Guardian, oo xustay in uu arrintaas ka shaaciyey telefishinadda waliba si toos ah.
"Waxaan soo laabtay anigoo leyga helay," ayuu Bolsonaro u sheegay koox wariyeyaal oo loo yeeray waqtiga qadada Talaadada maanta ah.
Bolsonaro, oo 65-sano jir ah, ayaa kamid ah hogaamiyeyaasha si ku cel-celis ah u dafiray halista musiibada Covid-19 iyo kala fogaanshiyaha.
Brazil waa waddanka labaad ee dadka ugu badan uu ku dhacay fayruska faafa, waxaana ka horeeya Mareykanka oo koowaad ah isla markaana diiwaan-geliyey 65,000 dhimasho ah iyo 1.6 milyan oo xaalado ah.
Bishii Maaj ayay ahayd markii Brazil ay xaqiijisay kiiskii ugu horeeyay ee caabuqa, waxaana waqtigaas uu Jair Bolsonaro hoos u dhigay khatartiisa.
Tan iyo waqtigaas, wuxuu si joogta ah uga qeybgalaa munaasabadaha dadweynaha iyo isu soo baxyadda la xiriira siyaasadda, badanaa af-saabka ama maasakarada wuxuu u xirtaa si qaldan ama maba qaataba.
Shaacinta in Jair Bolsonaro uu haleelay xanuunka ayaa kusoo hagaageysa saddex maalmood kadib markii uu hoygiisa kula qadeeyay danjiraha Mareykanka u jooga Brazil, Todd Chapman, kaas oo aan la hubin hadii uu soo ritay.
Jair Bolsonaro: Madaxweynaha Brazil oo beeniyey in laga helay Coronavirus
Caalamka 13.03.2020. 18:05
Tani ayaa sarre u qaadey shakiga laga qabo Donald Trump maadaama ay maalmo kahor kulmeen.
Brazil oo noqdey dalka labaad ee dadka ugu badan uu ku dilay Covid-19
Caalamka 22.06.2020. 15:20
DF oo halista dadka kasoo gaarta Covid-19 ka doorbiday olole doorasho
Soomaliya 07.07.2020. 07:10
DF Soomaaliya oo dib u dhigtay furitaanka duulimaadyadda gudaha
Soomaliya 17.06.2020. 13:35
Soomaliya 04.06.2020. 18:26
Kiisaska iyo dhimashada Covid-19 ee Soomaaliya oo sarre u kacday
Soomaliya 17.05.2020. 17:30
Kiisaska Coronavirus ee Puntland oo qarka u saaran in ay gaaraan 100
Puntland 12.05.2020. 23:31
Puntland oo shaacisay kiisas cusub oo ah safmarka Covid-19
Puntland 04.05.2020. 22:16